Hirshabeelle oo baaq u diray puntland iyo Galmudug – Qaranimo Online
You are here: Home 2016 October 25 Hirshabeelle oo baaq u diray puntland iyo Galmudug
Hirshabeelle oo baaq u diray puntland iyo Galmudug
Posted on October 25, 2016 by Ali Omar Ghedi | 0 Comments
Muqdisho, October 25, 2016: Cali C/llaahi Guudlaawe, Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Hirshabeelle, ayaa Madaxda Maamulada Puntland iyo Galmudug ugu baaqay iney ka qeyb qaataan joojinta dagaalada ka soconayo Magalada Gaalkacyo.
Waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in laga wada qeyb qaato joojinta dagaalka Gaalkacyo iyo nabadeynta Magaaladaasi.
Waxaa kale ee uu sheegay in Madaxweynayaasha labada Maamul Puntland iyo Galmudug, loogu baahan yahay in ay deg deg ah ugu hogaansamaan baaqyada nabadeed ee ka soo baxaya Madaxda Dowlada, beesha Caalamka iyo Culimo udiinka Soomaaliyeed.
Guudlaawe Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Hirshabeelle, ayaa sheegay in shacabka Gaalkacyo ay u baahan yihiin nabad iyo Xasilooni waarta.
Ciidamada Maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa weli isku horfadhiya Galbeedka Magaalada Gaalkacyo, waxaana laga Cabsi qabaan in mar kale ay halkaasi ku dagaalamaan, waana arrin fool- xun oo muddo soo taagneed.
Mahad Cabdalla Cawad : ”Tallada Dalka wixii maanta ka danbeeya Baarlamaanka cusub ayeey u taallaa”! December 27, 2016
Dhagayso:–Baaq Loodiray Shacabka Reer Muqdisho November 18, 2017
Uganda oo mar kale hadal Tahdiid ah u jeedisay DFS July 6, 2016
Ciidanka Axmad Madoobe oo Doolow maxaabiis ku xasuuqay. August 31, 2015
Somalia 2017: New President, Old Problems With Terrorism, Drought December 28, 2017
Doon la dagtay 12 ruux oo muslimiinta Rohingya ah October 9, 2017